သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ မပေါ့ဆသငျ့တဲ့လက်ခဏာမြား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မိဘတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ရငျသှေးလေးမှာ ဖြားနာတာကအစ တဈခုခု ပုံမှနျမဟုတျတာရှိတာနဲ့ အလှနျအမငျး စိုးရိမျတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျရောဂါလက်ခဏာတှကေ မစိုးရိမျသငျ့ဘူးလဲ၊ ဘယျလက်ခဏာတှကေ သတိထားဖို့လိုပွီး ဘယျလက်ခဏာတှကေ အရေးကွီးပွီး ဆရာဝနျနဲ့ အရေးတကွီး ပွသဖို့လိုလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါတယျ။ တဈခါတလမှော မိဘတှအေနနေဲ့ အရေးမကွီးဘူးအထငျနဲ့ သတိမထားမိလိုကျတာလေးတှကေလညျး ကလေးကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပွီး အရေးပျေါအခွအေနတှေလေညျး ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှရေဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွပေးပါမယျ။
1. ကိုယျအလေးခြိနျ ထူးထူးခွားခွား တကျလာခွငျး
ကလေးတှေ ဝလာတာကို မိဘတှကေ သဘောကတြတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ထူးထူးခွားခွား တကျလာတာက သတိထားစရာအခကျြလို့ပွောရငျ သိပျသဘောတူခငျြကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကလေးတှေ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးတဲ့အရှယျမှာ အစာအုပျစုတှကေို စုံလငျအောငျ ဂရုစိုကျပွီးကြှေးရပါမယျ။ ဒါမှသာ ကနျြးကနျြးမာမာ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုတဖွညျးဖွညျးခငျြး ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးလာတာမြိုးမဟုတျဘဲ အခြိနျအနညျးငယျအတှငျးမှာ ထူးထူးခွားခွား ဝလာတာမြိုးဆိုရငျတော့ သတိထားဖို့လိုပါမယျ။ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးနညျးတဲ့ Hypothyroidism ရောဂါ၊ ဖောရောငျခွငျး၊ Cushing’s syndrome၊ မှေးရာပါ ကွီးထှားဟျောမုနျးမညီမြှခွငျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ acromegaly ရောဂါ စတဲ့ ရောဂါတှရေဲ့လက်ခဏာတှေ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
ကလေးက အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ပငျပနျးနုံးခြိနတေတျသလား။ အိပျရေးဝအောငျ အိပျထားပမေယျ့လညျး အာရုံမစူးစိုကျနိုငျတာ၊ ပငျပနျးနုံးခှနေတော စတာတှေ ခံစားနရေပါသလား။ ကလေးတှမှော ကစားပွီးလို့ဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလုပျပွီးရငျဖွဈဖွဈ ပငျပနျးတာကပုံမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အမွဲလိုလို ပငျပနျးနှမျးနယျနတောဆိုရငျတော့ ဂရုပွုရမယျ့ ကနျြးမာရေးလက်ခဏာ ဖွဈပါတယျ။ အိပျနစေဉျ အသကျရှူရပျတာ၊ သှေးအားနညျးရောဂါ စတာတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ ကလေးဟာ မကျြလုံးတဈဝိုကျမှာ၊ ခွေ၊ လကျတှမှော ဖောရောငျလာတာ၊ အသားတှယေားတာ၊ အသကျရှူကွပျတာ စတဲ့လက်ခဏာတှေ ခံစားနပွေီဆိုရငျတော့ နီးစပျရာဆေးရုံဆေးခနျးကို အမွနျပွေးဖို့လိုပါပွီ။ ဒါဟာ တဈခုခုနဲ့ ဓာတျမတညျ့တဲ့အတှကျ ဖွဈတဲ့လက်ခဏာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အမြားစုမတညျ့တတျတာကတော့ မွပေဲ၊ ပုစှနျ၊ တိရစ်ဆာနျအမှေး၊ ပနျးဝတျမှုနျ စတာတှဖွေဈပွီး တခြို့ကလေးတှမှော ပြားတုပျခံရလို့လညျး ဒီလက်ခဏာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
4. အမွငျ့က ပွုတျကပြွီးနောကျ ထိုးအနျခွငျး
ကလေးဆိုတာတော့ အရမျးဆော့တတျတဲ့အရှယျတှဆေိုတော့ ခြျောလဲတာ၊ အမွငျ့ကပွုတျကတြာ စတာတှကေ သိပျထူးဆနျးတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အမွငျ့ကပွုတျကပြွီးနောကျမှာ သတိလဈသှားတာ၊ စကားကောငျးကောငျး မပွောနိုငျတာ၊ မပြို့ဘဲထိုးအနျတာ စတဲ့လက်ခဏာတှေ ပျေါလာရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျသှားရောကျ ပွသသငျ့ပါတယျ။ ခေါငျးအတှငျးပိုငျးကို ထိခိုကျတဲ့လက်ခဏာတှေ ဖွဈနိုငျလို့ပါပဲ။
ကလေးတှမှော ဗိုကျအောငျ့တယျဆိုတာက ဖွဈနကေလြက်ခဏာတဈမြိုးပါ။ အစားစားတာမြားသှားလို့၊ အစာကွမေလှယျတာတှေ အစားမြားသှားလို့၊ အပူအစပျတှေ၊ အသငျ့စားအစားအစာတှေ စတဲ့ အကွောငျးတှကွေောငျ့ ဗိုကျအောငျ့စနေိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗိုကျရဲ့ညာဘကျအောကျပိုငျးမှာ ဆိုးဆိုးရှားရှားအောငျ့တာ၊ ဖြားတာ၊ အော့အနျတာ၊ ဝမျးလြှောတာ စတဲ့လက်ခဏာတှေ စုပွီးဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ အူအတကျရောငျတာ ဖွဈနနေိုငျတဲ့အတှကျ ဆေးရုံဆေးခနျးကို ခကျြခငျြးသှားရောကျပွသဖို့ လိုပါတယျ။
6. ကိုယျအလေးခြိနျ ထူးထူးခွားခွားကခြွငျး
ကလေးက ကောငျးကောငျးစားနိုငျ၊ အိပျနိုငျ၊ ဆော့နိုငျနပေမေယျ့ ကိုယျအလေးခြိနျက သိသိသာသာကို ကကြလြာတာကလညျး ဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျပွသသငျ့တဲ့ လက်ခဏာတဈခု ဖွဈပါတယျ။
ကလေးက ဆော့ပွီးလို့ဖွဈစေ၊ နပေူထဲကပွနျလာပွီးဖွဈစေ ရဆောတာ၊ ရသေောကျခငျြတာက ပုံမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု မလုပျရသေးဘဲ၊ နပေူထဲမထှကျရဘဲ ရေ ခဏခဏဆာနတော၊ ရသေောကျပွီးရငျလညျး မဝဘဲ ခဏခဏ ရပေဲတောငျးနတောဆိုရငျတော့ ကလေးကိုဆရာဝနျနဲ့ ပွသသငျ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ဆီးခြိုရောဂါရဲ့လက်ခဏာ ဖွဈနနေိုငျလို့ပါပဲ။
8. ဆီးသှားရငျ နာကငျြခွငျး
တကယျလို့ ကလေးက ဆီးသှားတိုငျး နာကငျြနတေယျဆိုရငျ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတဲ့လက်ခဏာ ဖွဈနိုငျသလို ဆီးကြောကျတညျတာလညျး ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ ဆေးခနျး အမွနျသှားပွသငျ့ပါတယျ။
9. အပွငျးဖြားပွီး ခေါငျးကိုကျခွငျး
ကလေးအရှယျမှာ ဖြားနာတာ၊ ခြောငျးဆိုး၊ နှာစေးတာက ဖွဈနကေဆြိုပမေယျ့ ကိုယျပူအရမျးကွီးပွီး ဆကျတိုကျကိုယျပူနပွေီး ခေါငျးအရမျးကိုကျတာလညျး တှဲဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ ဦးနှောကျအမွှေးရောငျတာ ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ ဆေးရုံဆေးခနျးကို အမွနျသှားပွသငျ့ပါတယျ။
နှာခေါငျးပိတျတာတို့၊ နှာစေးနတောတို့ကွောငျ့ ကလေးတှမှော အသကျရှူရခကျနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကလေးက ရငျဘတျတှခြေိုငျ့ဝငျတဲ့အထိ အသကျရှူနရေတာ၊ နှုတျခမျးတှေ အသားတှေ ပွာနှမျးနတော၊ အသကျရှူတဲ့အခါ တရှီရှီမွညျတာ စတဲ့လက်ခဏာတှရှေိနရေငျတော့ အရေးပျေါပွသဖို့ လိုပါတယျ။ ပွငျးထနျတဲ့ လပွှေနျရောငျခွငျးဖွဈနိုငျသလို ဓာတျမတညျ့ခွငျး၊ ပနျးနာရငျကပျြရောဂါရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အပျေါမှာ ပွောပွခဲ့တဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေတော့ ကလေးတှအေတှကျ တကယျကို အရေးကွီးတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့အတှကျ တဈခုခုကွုံလာတာနဲ့ ဆေးရုံဆေးခနျးပွသဖို့၊ မပေါ့ဆကွဖို့အတှကျ ထပျမံသတိပေးလိုကျရပါတယျ။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးမှာ ဖျားနာတာကအစ တစ်ခုခု ပုံမှန်မဟုတ်တာရှိတာနဲ့ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေက မစိုးရိမ်သင့်ဘူးလဲ၊ ဘယ်လက္ခဏာတွေက သတိထားဖို့လိုပြီး ဘယ်လက္ခဏာတွေက အရေးကြီးပြီး ဆရာဝန်နဲ့ အရေးတကြီး ပြသဖို့လိုလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ အရေးမကြီးဘူးအထင်နဲ့ သတိမထားမိလိုက်တာလေးတွေကလည်း ကလေးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် မပေါ့ဆသင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
1. ကိုယ်အလေးချိန် ထူးထူးခြားခြား တက်လာခြင်း
ကလေးတွေ ဝလာတာကို မိဘတွေက သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ထူးထူးခြားခြား တက်လာတာက သတိထားစရာအချက်လို့ပြောရင် သိပ်သဘောတူချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့အရွယ်မှာ အစာအုပ်စုတွေကို စုံလင်အောင် ဂရုစိုက်ပြီးကျွေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ ကျန်းကျန်းမာမာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းချင်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ထူးထူးခြားခြား ဝလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့လိုပါမယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့ Hypothyroidism ရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ Cushing’s syndrome၊ မွေးရာပါ ကြီးထွားဟော်မုန်းမညီမျှခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ acromegaly ရောဂါ စတဲ့ ရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးက အချိန်တော်တော်များများမှာ ပင်ပန်းနုံးချိနေတတ်သလား။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ထားပေမယ့်လည်း အာရုံမစူးစိုက်နိုင်တာ၊ ပင်ပန်းနုံးခွေနေတာ စတာတွေ ခံစားနေရပါသလား။ ကလေးတွေမှာ ကစားပြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းတာကပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမြဲလိုလို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာဆိုရင်တော့ ဂရုပြုရမယ့် ကျန်းမာရေးလက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်တာ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကလေးဟာ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ၊ ခြေ၊ လက်တွေမှာ ဖောရောင်လာတာ၊ အသားတွေယားတာ၊ အသက်ရှူကြပ်တာ စတဲ့လက္ခဏာတွေ ခံစားနေပြီဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်ပြေးဖို့လိုပါပြီ။ ဒါဟာ တစ်ခုခုနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့အတွက် ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများစုမတည့်တတ်တာကတော့ မြေပဲ၊ ပုစွန်၊ တိရစ္ဆာန်အမွေး၊ ပန်းဝတ်မှုန် စတာတွေဖြစ်ပြီး တချို့ကလေးတွေမှာ ပျားတုပ်ခံရလို့လည်း ဒီလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
4. အမြင့်က ပြုတ်ကျပြီးနောက် ထိုးအန်ခြင်း
ကလေးဆိုတာတော့ အရမ်းဆော့တတ်တဲ့အရွယ်တွေဆိုတော့ ချော်လဲတာ၊ အမြင့်ကပြုတ်ကျတာ စတာတွေက သိပ်ထူးဆန်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမြင့်ကပြုတ်ကျပြီးနောက်မှာ သတိလစ်သွားတာ၊ စကားကောင်းကောင်း မပြောနိုင်တာ၊ မပျို့ဘဲထိုးအန်တာ စတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်သွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို ထိခိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။
ကလေးတွေမှာ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုတာက ဖြစ်နေကျလက္ခဏာတစ်မျိုးပါ။ အစားစားတာများသွားလို့၊ အစာကြေမလွယ်တာတွေ အစားများသွားလို့၊ အပူအစပ်တွေ၊ အသင့်စားအစားအစာတွေ စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဗိုက်အောင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုက်ရဲ့ညာဘက်အောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားအောင့်တာ၊ ဖျားတာ၊ အော့အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ စတဲ့လက္ခဏာတွေ စုပြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အူအတက်ရောင်တာ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် ဆေးရုံဆေးခန်းကို ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသဖို့ လိုပါတယ်။
6. ကိုယ်အလေးချိန် ထူးထူးခြားခြားကျခြင်း
ကလေးက ကောင်းကောင်းစားနိုင်၊ အိပ်နိုင်၊ ဆော့နိုင်နေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်က သိသိသာသာကို ကျကျလာတာကလည်း ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးက ဆော့ပြီးလို့ဖြစ်စေ၊ နေပူထဲကပြန်လာပြီးဖြစ်စေ ရေဆာတာ၊ ရေသောက်ချင်တာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မလုပ်ရသေးဘဲ၊ နေပူထဲမထွက်ရဘဲ ရေ ခဏခဏဆာနေတာ၊ ရေသောက်ပြီးရင်လည်း မဝဘဲ ခဏခဏ ရေပဲတောင်းနေတာဆိုရင်တော့ ကလေးကိုဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆီးချိုရောဂါရဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။
8. ဆီးသွားရင် နာကျင်ခြင်း
တကယ်လို့ ကလေးက ဆီးသွားတိုင်း နာကျင်နေတယ်ဆိုရင် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်သလို ဆီးကျောက်တည်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆေးခန်း အမြန်သွားပြသင့်ပါတယ်။
9. အပြင်းဖျားပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ကလေးအရွယ်မှာ ဖျားနာတာ၊ ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးတာက ဖြစ်နေကျဆိုပေမယ့် ကိုယ်ပူအရမ်းကြီးပြီး ဆက်တိုက်ကိုယ်ပူနေပြီး ခေါင်းအရမ်းကိုက်တာလည်း တွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်သွားပြသင့်ပါတယ်။
နှာခေါင်းပိတ်တာတို့၊ နှာစေးနေတာတို့ကြောင့် ကလေးတွေမှာ အသက်ရှူရခက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးက ရင်ဘတ်တွေချိုင့်ဝင်တဲ့အထိ အသက်ရှူနေရတာ၊ နှုတ်ခမ်းတွေ အသားတွေ ပြာနှမ်းနေတာ၊ အသက်ရှူတဲ့အခါ တရွှီရွှီမြည်တာ စတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေရင်တော့ အရေးပေါ်ပြသဖို့ လိုပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လေပြွန်ရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလို ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ကလေးတွေအတွက် တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုခုကြုံလာတာနဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းပြသဖို့၊ မပေါ့ဆကြဖို့အတွက် ထပ်မံသတိပေးလိုက်ရပါတယ်။